Donations to Mandalay Monastery
by sys | Nov 25, 2019 | CSR
5.2.2018 Donations to Paungdawoo Mandalay Monastery5BB one Internet 22 Mbps and two FTTH Internet for 14 Mbps.
Donations for Flood at Bago
37.7.2018 Bago Cities and Near VillagesCash, Rice packs, Noodles, Cans.
Let’s make our worldagreener place
18.6.2019Chauk and Yay Nan Chaung အနာဂတ်ကာလစိမ်းလန်းဖို့သစ်ပင်စိုက်ဒါနပြုကြစို့…..🍃🍀🌿🌴🌳🌲 Let’s make our world ” A Greener Place “၁၈/၀၆/၂၀၁၉ရက်နေ့ ရေနံချောင်းမြို့နယ်နှင့် ချောက်မြို့နယ်တို့တွင် အပူဒဏ်လျှော့ကျရေးစိမ်းလန်းစိုပြေရေးအတွက်...
5BB Donations at Training school for girls
21.6.2017Training School for Girls (110 orphanage girls) Breakfast, lunch, dinner, stationary, lunchboxes. 5BB ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကိုယ်စား 5BB ၏ ဝန်ထမ်းမိသားစုများမှ ၂၁.၆.၂၀၁၇ (ဗုဒ္ဒဟူးနေ့) တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊...
Donations at Kyaik Wine Boys Training Schools
28.6.2017 Kyaik Wine Boys Training Schools Breakfast, lunch, dinner, backpacks, clothes, stationary 5BB ၏ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကိုယ်စား 5BB ၏ ဝန်ထမ်းမိသားစုများမှ ၂၈.၆.၂၀၁၇ (ဗုဒ္ဒဟူးနေ့)တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊...